जागरणका बेला भाँडभैलो, तरुण दलमा कसको निर्णय सदर ? - Nepal's Digital News Paper
जागरणका बेला भाँडभैलो, तरुण दलमा कसको निर्णय सदर ?
काठमाडौं । कांग्रेस जागरण अभियानमा लागेका बेला उसको भ्रातृसंगठनमा भने भाँडभैलो मच्चिएको छ । अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले गरेका दुई निर्णय बदर गरिदिएका छन् ।
संगठनका तत्कालीन सिन्धुपाल्चोक उपाध्यक्ष सगुन श्रेष्ठलाई निष्काशनको कारबाही यथावत रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताएका छन् । सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष पदमा महासचिवले गरेको मनोनयन उनले बदर गरेका छन् । सप्तरीमा कसैलाई पनि जिल्ला अध्यक्ष मनोनयन नगरिएको बस्नेतले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । महासचिवले विधा, विधि र प्रक्रिया एवं सिद्धान्त र आदर्शविपरीत गई गरेका पत्राचार एवं कार्यहरु अवैधानिक भएको उनले जनाएका छन् । उनले महासचिवलाई पदीय जिम्मेवारीको परिधिमा रहन र संगठनको हितविपरीत अशिष्ट व्यवहार र क्रियाकलाप नगर्न सचेत गराएका छन् ।
महासचिवले मंगलबार मात्रै श्रेष्ठलाई कारबाही फुकुवा गरिएको पत्र पठाएका थिए । उनले मंगलबारै सीताप्रसाद यादवलाई तीन महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको पत्र पठाएका थिए । उनले बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अध्यक्षको कदमको भत्र्सना गरेका छन् । ‘तरुण दलका अध्यक्षले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पटक–पटक संगठनलाई कमजोर बनाउने गतिविधितर्फ उन्मुख भएको आरोप उनले लगाएका छन् । ‘विधानविपरीत गरिएका निर्णय हामीलाई मान्य हुनेछैन’, उनले भनेका छन् । अध्यक्षले एकलौटी विधानविपरीत गरेका निर्णय खारेज गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘साथै तरुण अध्यक्षको हवाला दिएर अबदेखि कुनै पनि अवैधानिक निर्णय गर्ने अधिकार नभएको समेत प्रस्ट पार्न चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।